ဥာဏ်ရည်တိုးတက်စေဖို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ယူမလဲ – Gentleman Magazine
ထူးခြှနျထကျမွကျဖို့ နညျးလမျး (၇)ခု
ထူးချွန်ထက်မြက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလား ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဟာ မွေးဖွားလာရကနေ အခုအချိန်အထိ တသမတ်ထဲရှိနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာသင်ယူမှု အသစ်တွေကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ထူးချွန်ထက်မြက်လာအောင် လေ့ကျင့်ယူလို့ ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကို တိုးတက်စေပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်လာစေမယ့် နည်းလမ်း(၇)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဂီတတူရိယာတစ်ခုခု တီးမှုတ်ပါ
တူရိယာတစ်ခုခုကို တီးမှုတ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်း၊ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း၊ ဘာသာစကား၊ သင်္ချာစွမ်းရည်နဲ့ ကြွက်သားငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဂီတတူရီယာတွေ တီးမှုတ်နေချိန်မှာ ဦးနှောက်အတွင်း မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုအသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက် အသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကြီး မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းရည်းတွေ အမြဲတိုးတက်ကောင်းမွန်နေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ သတင်းစသဖြင့် ဘယ်လိုစာအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် စာများများဖတ်လို့ ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးကတော့ အတူတူပါပဲ။ စာဖတ်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်သလို ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကို တိုးတက်လာစေနိုင်ပြီး နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဝေမျှခံစားတတ်လာစေပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာလည်း အလုပ်ကို ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည် ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်ပါ။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်တာက အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ဆောင်တာထက် ပိုထိရောက်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်၊ လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်းတွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တစ်မျိုးကို ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ခူးချွန်ထက်မြက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိပဲ အထိုင်များမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းပြန်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကို ယုတ်လျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခု သင်ယူပါ။
ဘာသာစကားနှစ်ခုပြောတတ်သူတွေက တစ်ခုတည်းပြောတတ်သူတွေထက် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိတွေ ပိုဖြေနိုင်တာကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါဆယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဉာဏ်ရည်တိုးတက်လာဖို့အတွက် ဉာဏ်စမ်းတွေဖြေရှင်းတာထက် နောက်ထပ်ဘာသာစကား အသစ်တစ်ခုကို သင်ယူလိုက်ပါ။ ဘာသာစကားအသစ်တွေ လေ့လာသင်ယူခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ စီစဉ်ရေးဆွဲနိုင်စွမ်းတွေလိုမျိုး ခေါင်းသုံးရတဲ့စွမ်းရည်တွေ ထူးချွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘာသာစကား အနည်းဆုံးနှစ်ခုလောက်ပြောတတ်တာက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံစားသိရှိနိုင်စွမ်းလည်း တိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
စာမေးပွဲနီးလာတဲ့အခါမှာ ကျောင်းသားအများစုက စာတွေအားလုံးကို စုပြုံကျက်မှတ်ပြီး ဖြေလေ့ရှိပါတယ်။ စာမေးပွဲမှာအဆင်ပြေသွားပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျက်ထားသမျှတွေအားလုံး မေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘ၀မှာ သင်ယူလေ့လာခဲ့သမျှထဲက အချို့အရာတွေကိုမေ့ပျောက်သွားရာတာဟာ အထပ်ထပ်လေ့လာမှု မရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ကို သင်ယူခြင်းက မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဘာသာစကားအသစ်အတွက် ဝေါဟာရအသစ်တွေ၊ သဒ္ဒါတည်ဆောက်ပုံတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါလေ့လာမှတ်သားနေရတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာရင်းနဲ့ လေ့လာမှတ်သားစရာတွေကို အထပ်ထပ်လေ့လာမှတ်သားတတ်အောင့် လေ့ကျင့်ပါ။ ဒီအလေ့အကျင့်ကလည်း သင်ယူမှတ်သားထားသမျှတွေကို အမြဲမှတ်မိနေစေပြီး ဉာဏ်ရည်ကိုလည်း ထက်မြက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်ပေးပါ။
ဆူဒိုကုတွေ၊ ဉာဏ်စမ်းတွေ၊ စကားထာတွေ၊ ကဒ်ဂိမ်းတွေ စသဖြင့် ကစားပြီး ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းက သင့်ဉာဏ်ရည်ကို တိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် အရေးကိစ္စတစ်ခုကို မတူညီတဲ့အမြင်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ ဆင်ခြင်သုံးသပ်လာနိုင်ပြီး အပြုအမူနဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို အကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်တွေးခေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေ လျော့ပါးသက်သာပြီး လေ့လာသင်ယူမှု မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
တရားထိုင်ခြင်းဟာ အောင်မြင်သူတွေရဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ။ တရားထိုင်နေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီး ခံစားသက်ဝင်ချင်တဲ့အရာကို ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကို စွမ်းအားအပြည့်နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်သလို မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲ့ အခြားသူတွေကို ယုံကြည်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို တိုးတက်လာအောင် သင်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထူးချွန်ထက်မြက်လာအောင် လေ့ကျင့်ခြင်းအာဖြသင့် အားသားချက်တွေကို ပိုထူးခြားလာစေပြီး အားနည်းချက်တွေကို ပြင်ဆင်တိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြှနျထကျမွကျသူတဈယောကျဖွဈခငျြပါသလား ? ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးဟာ မှေးဖှားလာရကနေ အခုအခြိနျအထိ တသမတျထဲရှိနတော မဟုတျပါဘူး။ လလေ့ာသငျယူမှု အသဈတှကေို လုပျဆောငျခွငျးအားဖွငျ့ ဦးနှောကျရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို ပိုမိုကောငျးမှနျစပွေီး ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးကို ထူးခြှနျထကျမွကျလာအောငျ လကေ့ငျြ့ယူလို့ ရပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ဉာဏျရညျကို တိုးတကျစပွေီး ထူးခြှနျထကျမွကျလာစမေယျ့ နညျးလမျး(၇)ခုကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ဂီတတူရိယာတဈခုခု တီးမှုတျပါ
တူရိယာတဈခုခုကို တီးမှုတျခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ ဆနျးသဈတီထှငျနိုငျစှမျး၊ ကြိုးကွောငျးဆကျစပျတှေးချေါနိုငျစှမျး၊ ဘာသာစကား၊ သင်ျခြာစှမျးရညျနဲ့ ကွှကျသားငယျဖှံ့ဖွိုးမှုတိုးကို အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ဂီတတူရီယာတှေ တီးမှုတျနခြေိနျမှာ ဦးနှောကျအတှငျး မှတျဉာဏျဆိုငျရာ ဆကျသှယျမှုအသဈတှေ ဖွဈပျေါလာတဲ့အတှကျ အသကျအရှယျဘယျလောကျပဲ ကွီးကွီး မှတျဉာဏျစှမျးရညျ၊ ပွဿနာဖွရှေငျးနိုငျစှမျးနဲ့ ဦးနှောကျရဲ့ စှမျးရညျးတှေ အမွဲတိုးတကျကောငျးမှနျနစေမှောဖွဈပါတယျ။
ဝတ်ထု၊ ဆောငျးပါး၊ သတငျးစသဖွငျ့ ဘယျလိုစာအမြိုးအစားပဲဖွဈဖွဈ စာမြားမြားဖတျလို့ ရရှိမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးကတော့ အတူတူပါပဲ။ စာဖတျခွငျးဟာ စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ပါးသကျသာစနေိုငျသလို ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးကိုလညျး တိုးတကျစပေါတယျ။ ပွဿနာဖွရှေငျးနိုငျစှမျးကို တိုးတကျလာစနေိုငျပွီး နစေ့ဉျဘဝရဲ့စိနျချေါမှုတှကေို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အခွားသူတှရေဲ့ခံစားခကျြတှကေို ဝမြှေခံစားတတျလာစပေါတယျ။ လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာလညျး အလုပျကို ပိုပွီးထိထိရောကျရောကျလုပျဆောငျလာနိုငျပွီး စီမံခနျ့ခှဲမှုစှမျးရညျ ပိုကောငျးလာမှာဖွဈပါတယျ။
၃။ ပုံမှနျလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျဆောငျပါ။
ပုံမှနျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဆောငျတာက အပွငျးအထနျလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျဆောငျတာထကျ ပိုထိရောကျပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဆောငျနခြေိနျမှာ သငျ့ရဲ့မှတျဉာဏျ၊ လလေ့ာသငျယူနိုငျစှမျး၊ အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျးနဲ့ နားလညျသဘောပေါကျနိုငျစှမျးတှကေို အထောကျအကူဖွဈစတေဲ့ ပရိုတငျးဓာတျတဈမြိုးကို ခန်ဓာကိုယျက ထုတျလုပျပေးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးကို ခူးခြှနျထကျမွကျလာစမှောဖွဈပါတယျ။ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမရှိပဲ အထိုငျမြားမယျဆိုရငျတော့ ပွောငျးပွနျသကျရောကျမှုဖွဈပွီး ဦးနှောကျရဲ့စှမျးရညျတှကေို ယုတျလြော့သှားစနေိုငျပါတယျ။
၄။ ဘာသာစကားအသဈတဈခု သငျယူပါ။
ဘာသာစကားနှဈခုပွောတတျသူတှကေ တဈခုတညျးပွောတတျသူတှထေကျ ဉာဏျစမျးပဟဠေိတှေ ပိုဖွနေိုငျတာကို လလေ့ာတှရှေိ့ခဲ့ပါဆယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဉာဏျရညျတိုးတကျလာဖို့အတှကျ ဉာဏျစမျးတှဖွေရှေငျးတာထကျ နောကျထပျဘာသာစကား အသဈတဈခုကို သငျယူလိုကျပါ။ ဘာသာစကားအသဈတှေ လလေ့ာသငျယူခွငျးအားဖွငျ့ ပွဿနာဖွရှေငျးနိုငျစှမျးနဲ့ စီစဉျရေးဆှဲနိုငျစှမျးတှလေိုမြိုး ခေါငျးသုံးရတဲ့စှမျးရညျတှေ ထူးခြှနျလာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘာသာစကား အနညျးဆုံးနှဈခုလောကျပွောတတျတာက ပတျဝနျးကငျြကို ခံစားသိရှိနိုငျစှမျးလညျး တိုးတကျလာစနေိုငျပါတယျ။
စာမေးပှဲနီးလာတဲ့အခါမှာ ကြောငျးသားအမြားစုက စာတှအေားလုံးကို စုပွုံကကျြမှတျပွီး ဖွလေရှေိ့ပါတယျ။ စာမေးပှဲမှာအဆငျပွသှေားပမေယျ့ သိပျမကွာခငျမှာပဲ ကကျြထားသမြှတှအေားလုံး မသှေ့ားတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ ကြှနျတျောနစေ့ဉျဘဝမှာ သငျယူလလေ့ာခဲ့သမြှထဲက အခြို့အရာတှကေိုမပြေ့ောကျသှားရာတာဟာ အထပျထပျလလေ့ာမှု မရှိလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာသာစကားအသဈတဈကို သငျယူခွငျးက မှတျဉာဏျကို တိုးတကျစနေိုငျတယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ ဘာသာစကားအသဈအတှကျ ဝေါဟာရအသဈတှေ၊ သဒ်ဒါတညျဆောကျပုံတှကေို ထပျခါထပျခါလလေ့ာမှတျသားနရေတာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားသှားလာရငျးနဲ့ လလေ့ာမှတျသားစရာတှကေို အထပျထပျလလေ့ာမှတျသားတတျအောငျ့ လကေ့ငျြ့ပါ။ ဒီအလအေ့ကငျြ့ကလညျး သငျယူမှတျသားထားသမြှတှကေို အမွဲမှတျမိနစေပွေီး ဉာဏျရညျကိုလညျး ထကျမွကျလာစမှောဖွဈပါတယျ။
၆။ ဦးနှောကျကို လကေ့ငျြ့ပေးပါ။
ဆူဒိုကုတှေ၊ ဉာဏျစမျးတှေ၊ စကားထာတှေ၊ ကဒျဂိမျးတှေ စသဖွငျ့ ကစားပွီး ဦးနှောကျကိုလကေ့ငျြ့ပေးခွငျးက သငျ့ဉာဏျရညျကို တိုးတကျလာစမှောဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ဦးနှောကျကို လကေ့ငျြ့ပေးခွငျးအားဖွငျ့ အရေးကိစ်စတဈခုကို မတူညီတဲ့အမွငျရှုထောငျ့အမြိုးမြိုးကနေ ဆငျခွငျသုံးသပျလာနိုငျပွီး အပွုအမူနဲ့ စိတျခံစားခကျြတှကေို အကြိုးအကွောငျးဆကျစပျတှေးချေါလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စိုးရိမျကွောငျ့ကမြှုတှေ လြော့ပါးသကျသာပွီး လလေ့ာသငျယူမှု မွနျဆနျလာမှာဖွဈပါတယျ။
တရားထိုငျခွငျးဟာ အောငျမွငျသူတှရေဲ့အလအေ့ကငျြ့တဈခုဖွဈလာနပေါပွီ။ တရားထိုငျနခြေိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဦးနှောကျလှိုငျးတှကေို ထိနျးခြုပျထားနိုငျပွီး ခံစားသကျဝငျခငျြတဲ့အရာကို ဘယျအခြိနျမှာပဲဖွဈဖွဈ ခံစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စစေ့ပျညှိနှိုငျးမှုတှကေို စှမျးအားအပွညျ့နဲ့ လုပျဆောငျနိုငျမှာဖွဈသလို မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုနဲ့ အခွားသူတှကေို ယုံကွညျလာအောငျ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးတှေ ကောငျးလာမှာဖွဈပါတယျ။
အခုဖျောပွခဲ့တဲ့ နညျးလမျးတှနေဲ့ သငျ့ရဲ့ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးကို တိုးတကျလာအောငျ သငျကိုယျတိုငျ လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ ထူးခြှနျထကျမွကျလာအောငျ လကေ့ငျြ့ခွငျးအာဖွသငျ့ အားသားခကျြတှကေို ပိုထူးခွားလာစပွေီး အားနညျးခကျြတှကေို ပွငျဆငျတိုးတကျလာစမှောဖွဈပါတယျ။
Previous: အလှဆုံးမိန်းကလေးတွေမှာ ဘာ့ကြောင့်ရည်းစားမရှိတာလဲ
Next: စိတ်ထက် ကိုယ်က မြန်နေတဲ့အခါ စိတ်ညစ်မနေနဲ့ 18+